के तपाईंको घाँटी लामो समय देखि दुखिरहेको छ ? हुनसक्छ यस्तो गम्भीर समस्या, थाहा पाइराख्नुस् ! – " सुलभ खबर "
कुनै ठूलो रोगले अचानक कसैको शरीरमा कब्जा गर्दैन। शरीरमा थुप्रै संकेत देखा पर्छन्। घाँटीको क्यान्सर ग-म्भीर रोग हो, जुन पछिल्लो समयमा बढ्दो रूपमा छ। व्यस्त जीवनशैलीका साथै थुप्रै रोगहरु बढ्न थालेका छन्। घाँटीको क्यान्सरले मानिसको घाँटी पूर्ण रूपमा नष्ट गर्न सक्छ। कहिलेकाँही मानिसमा उनीहरूको खराब बानीको कारणले यो रोग लाग्नसक्छ। घाँटीको क्यान्सर के हो? यसको लक्षणहरु र यसबाट बच्ने उपायहरुको बारेमा जान्नुहोस्…..
के हो त घाँटीको क्यान्सर ?
घाँटीको क्यान्सर एक प्रकारको ट्यूमर हो जसलाई घाँटीको क्यान्सर पनि भनिन्छ। मानिसको घाँटीमा एक ट्यूब हुन्छ जुन नाकको पछाडि हुन्छ। यो हड्डी धेरै बलियो हुँदैन। घाँटीको क्यान्सरले यो हड्डीलाई प्रभाव पार्छ। घाँटीमा रहेका विभिना कोषबाट यो क्यान्सर सुरु हुन्छ। पहिले घाँटीको क्यान्सर पुरुषहरूमा बढी देखिन्थ्यो, तर अब यसका लक्षणहरू समान रूपमा महिलामा पनि देखिन्छन्।
घाँटीको क्यान्सर पछाडि थुप्रै कारणहरू छन्, तर एउटा मुख्य कारण भनेको अल्कोहल सेवन गर्नु हो। लामो समयसम्म अल्कोहल सेवन गर्ने मानिसमा घाँटीको क्यान्सर हुने सम्भावना उच्च हुन्छ। यस बाहेक, सुर्तीजन्य सेवन, धूम्रपान, घाँटीमा पौष्टिक तत्वहरूको अभावले पनि यस रोगलाई निम्त्याउन सक्छ।
यदि लामो समयसम्म घाँटी दुखिरहेको छ भने, बेवास्ता नगर्नुहोस्। सास फेर्न समस्या, आवाज परिवर्तन, घाँटीको साथ कान दुख्ने, घाँटी दुख्ने, अचानक वजन बढ्ने, खाना निल्न कठिनाई, यस्तो लक्षण देखा पर्दा सावधान रहनुहोस् र तुरुन्त डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्।
यदि माथि उल्लेख गरिएका लक्षण मध्य कुनै पनि लक्षण लामो समयसम्म देखियो भने सबैभन्दा पहिले धुम्रपान र अल्कोहल सेवन गर्न त्याग्नुहोस्। आफ्नो दैनिक आहारमा ताजा फलफूल, दूध, हरियो तरकारीहरू समावेश गर्नुहोस्। दैनिक व्यायाम गर्नुहोस्। तातो पानीले गार्गल गर्नुहोस्। यी सबै प्रारम्भिक उपायहरू गरिसकेपछि पनि लक्षणहरू रहिरह्यो भने तुरुन्त डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्।